पेन्टिङ थेममा ‘रोमियो एन्ड मुना’को गीत (भिडियो)
११ जेठ, काठमाडौं ।चलचित्र ‘रोमियो एन्ड मुना’ को दोश्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । आउँदो साउन ११ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको यो चलचित्रको सार्वजनिक ‘पल पल’ बोलको गीतमा मुख्य कलाकार विनय श्रेष्ठ र
हेर्नुहोस् कसरत गर्दा पसिना बगाउने रोबोट (भिडियो सहित)
पौष १९, काठमाण्डौँ । वैज्ञानिकहरूले मानवसदृश एक रोबोट तयार पारेका छन् । उक्त रोबोटले कसरतका सिट अप्स र पुश अप्स गर्छ र पसिना पनि चुहाउँछ । रोबोटमा कृत्रिम प्रणाली जडान गरिएको छ जसकारण उसलाई पसिना आउँछ
हेर्दै मन रुवाउने आजको एक तस्बिर, बिरगन्ज आगलागीमा जल्दा जल्दै यसरी हिडे एक युवा- Video
काठमाडौ । पर्साको वीरगञ्जमहानगरपालिकास्थित गण्डक नहर क्षेत्रमा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भएको छ । आगलागीमा परि २ जनाको मृत्यु भएको छ । ६ जना घाइते भएका छन् । आगो निभाउन दमकल लिएर गएका ६
नदी माथि बनेको संसारकै सबै भन्दा सुन्दर हाईवे,हेर्नुस् भिडियो
संसारकै सबै भन्दा सुन्दर हाईवे, जुन नदीमाथि बनेको छ
नायिका ऋचालाई अन्य नायिकाहरुले लेखे Get Well Soon, के दिमाग बिग्रिएको हो ?
मंसिर, काठमाडौं । फिल्म ‘छक्का पन्जा २’को विवाद अझै नसकिने भएको छ । फिल्मको गीत रिलिज भएदेखि नै सुरु भएको विवाद र आलोचना फिल्मले ५१ दिन मनाइसक्दा पनि नसकिने देखिएको छ । अब, अभिनेत्री ऋचा
हिमाल सागरले ल्याए ‘माया त दुई तर्फिनै’
काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक आकासका चर्चित गायक हिमाल सागरको ‘माया त दुई तर्फिनै’ बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । धौलागिरी क्यासेट सेन्टरले बजारमा ल्याएको उक्त गीतमा हिमालकै शब्द संगीत रहेको छ । झण्डैं डेड दशक
होचा कलाकार दिपेनको अन्तिम अन्तर्वाता यस्तो थियो- मलाई बचाईदिनुस म बाँच्न चाहान्छु (भिडियो सहित)
मंसिर १, काठमाडौं । संसारकै होचा कलाकार दिपेन शाहको बिहिबार बिहान ९ बजे निधन भयो । मुटु, खुट्टा तथा निमोनिया जस्तो रोगका कारण उनको निधन भएको हो । साथै उनको निधनले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रपनि
Busses in nepal
The Everest region in Nepal is more than just trekking, it isamilestone in anyone’s life; and some have even described the experience asajourney close to Nirvana. Located in the northeast province of Nepal, this isacolony to